ဦးနှောက် ကို ပျက်စီးစေသော အကြောင်းတရား (၁၀) ခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ဦးနှောက် ကို ပျက်စီးစေသော အကြောင်းတရား (၁၀) ခု
ဦးနှောက် ကို ပျက်စီးစေသော အကြောင်းတရား (၁၀) ခု
Posted by ခင်ခ on Oct 26, 2012 in Health & Fitness | 19 comments
ခင်ခရဲ့တိုလီမိုလီစာပေစုတွေထဲက ဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်တစ်ခုထဲမှ ဦးနှောက် ကို ပျက်စီးစေသော အကြောင်းတရား (၁၀) ခု အကြောင်းလေးကို ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတအဖြစ် မျှဝေရေးပေးမိတာပါ။ ဦးနှောက်ကို ပျက်စီးစေတဲ့ အကြောင်းတရား (၁၀) ခုကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါဘဲဗျာ။
အသိဥာဏ် အတွေးအခေါ်ပိုင်းပါတဲ့ စကားစမြည်မျိုး ပြောပေးခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေပါတယ်။
၂) စိတ်ဝင်စားတက်ကြွစွာ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမရှိခြင်း
စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်ကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကို တက်ကြွစေတဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေ လုပ်မပေးရင် ဦးနှောက်ကို ကျုံ့စေပါတယ်။
၃) ကျန်းမာရေးမကောင်းချိန်မှာ ဦးနှောက်ကို အသုံးပြုခြင်း
ကျန်းမာရေးမကောင်းချိန်မှာ (ဦးနှောက်သုံးရတဲ့) အလုပ်ပြင်းထန်စွာလုပ်တာမျိုး၊ စာကျက် စာဖတ်တာမျိုးတွေဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေ ကို လျော့ကျစေသလို ဦးနှောက်ကိုလည်း ပျက်စီးစေပါတယ်။
၄) အိပ်ချိန်မှာ ခေါင်းကို ဖုံးအုပ်ထားခြင်း
ခေါင်းကိုဖုံးအုပ်ပြီး (ခေါင်းမြီးခြုံပြီး) အိပ်ခြင်းအားဖြင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေ စုစည်းမှုကို တိုးလာစေပြီး အောက်ဆီဂျင် စုစည်းမှုကိုတော့ လျော့ကျစေ တာကြောင့် ဦးနှောက်ကို ပျက်စီးစေတဲ့ အကျိုးဆက်ကို ရစေပါတယ်။
အိပ်စက်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်ကို အနားရစေပါတယ်။ အိပ်ချိန်မလုံလောက်တာမျိုး ရေရှည်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ ဆဲလ်တွေ သေဆုံး တဲ့နှုန်း မြင့်မား လာစေပါတယ်။
ဦးနှောက်ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အောက်ဆီဂျင်ကို အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းတဲ့လေကို ရှုသွင်းခြင်းအားဖြင့် ဦးနှောက် ကို အောက်ဆီဂျင်ထောက်ပံ့မှု လျော့နည်းစေပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်း စေပါတယ်။
အချိုဓာတ်တွေ လွန်ကဲနေခဲ့ရင် ပရိုတိန်းဓာတ်နဲ့ အာဟာရတွေ စုပ်ယူမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပြီး အာဟာရချို့တဲ့ စေတဲ့အပြင် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပါ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်းသောက်တာပါ ပဲ (း ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်ကို ကျုံ့စေသလို အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ (လူရဲ့ မှတ်ဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းတွေကို ကျဆင်းစေတဲ့ရောဂါ) ပါ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
လိုအပ်တာထက် ပိုစားသောက်ခြင်းအားဖြင့် ဦးနှောက်ရဲ့ သွေးလွှတ်ကြောတွေကို တင်းမာစေပြီး စိတ်စွမ်းရည်ကိုပါ ကျဆင်းစေပါတယ်။
မနက်စာမစားသူတွေရဲ့ သွေးထဲမှာ သကြားဓာတ် ပိုနည်းတတ်ပါတယ်။ အဲဒါရဲ့ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ဦးနှောက်အတွက် လုံလောက်တဲ့အာဟာရ မရတော့ဘဲ ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းရည်ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
မိမိဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားဖို့အတွက် လေ့လာမှတ်သားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှည်ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါ စေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း——-။
ကြည်ဆောင်းမောင်လေးက နွေနွေမိုးမိုး စောင်ခေါင်းမီးခြုံအိပ်တတ်တာ …
ဖြစ်စရာပိုစ့်လေးတွေ မျှော်နေပါ့မယ်…ကျွန်မတို့အတွက်တကယ်အကျိုးရှိပြီး မှတ်သားစရာပိုစ့်လေးပါ
ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ သွားပြီထင်တယ် အိပ်ချင်ရင်လဲတအားအိပ်တယ် မအိပ်ချင်ရင်လဲ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက် မအိပ်ဘူး။ ဆေးလိပ်လဲ စိတ်ကူးပေါက်ရင်မတရားသောက်တယ် အင်း ဆင်ခြင်မှ
ဟုတ်တယ်ကြည်ဆောင်းရေ နွေနွေမိုးမိုး စောင်ခေါင်းမီးခြုံအိပ်တတ်တဲ့ အကျင့်လေးကို ပြုပြင်လို့ရရင်
ပြုပြင်တာကောင်းပါလိမ့်မယ်၊ ဦးဆုံးကွန့်မန့်အတွက်လည်း ကျေးဇူးနော်။
မမေရေ ခုလိုဗဟုသုတဖြစ်စရာပိုစ့်လေးတွေ မျှော်နေပါ့မယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူး
နံပါတ် သုံးအချက်ကို ဆင်ခြင်မှ ဖြစ်မယ် ။ ကျမက နေမကောင်းလို့ ငြိမ်နေရပြီ ဆိုရင် စာဖတ်ချိန်ရပြီ လို့ သဘောထားပြီး စာတွေ လှိမ့်ဖတ်တတ်လို့ ။
အခုတောင် ဦးနှောက် က ခပ်ချောင်ချောင်ရယ် မတော် ပျက်သွားမှဖြင့်။
ဦးဦးခရဲ့ ပို့စ်တွေက တကယ့်ကို ဗဟုသုတရစေပါတယ် …… အမြဲတမ်းဖတ်ရှုအားပေး မှတ်သားနေပါတယ် … တစ်ခါတစ်လေ ဖတ်ပြီး ဘာမန့်ရမှန်းမသိလို့ မမန့်တဲ့အခါတွေလည်း ရှိပါတယ် ဦးဦးခ ………
ကိုခင်ခရေ…ခေါင်းစဉ် က ‘ပျက်စီး’ ပါ…ဆီး သွားတဲ့ ‘ပျက်ဆီး’ မဟုတ်ပါ…
၁နဲ့၂ ကတော့ ခုချိန်မှာ အတော်အားနည်းသွားပြီ…
၁-ထဲပါမယ့် နိုင်ငံရေး၊လူမျိုးရေးဆို ခေါင်းစဉ်ပဲ ဖတ်ပါတယ် …
၂-ထဲပါမယ့် ပို့စ်တွေဖတ်ပြီး မန့်ဖို့ ဉာဏ်နဲ့တွေးရတော့မယ်ဆိုရင် အုံးစားမခံ
ချင်တာနဲ့ မတွေးတော့ဘဲ မန့်လည်းမမန့်တော့ပါဘူး။ တခါတလေ ဉာဏ်မမီဘဲ
မန့်လိုက်ရင် တစ်လွဲတွေဖြစ်ပြီး ပြန်ဖတ်မိရင် အီလည်လည်ကြီး ခံစားရလို့ပါ…
မနှင်းနှင်းရေ ခေါင်းစဉ်သတ်ပုံလေး ပြောပေးလို့ကျေးဇူးနော်၊ ပြင်ထားလိုက်ပါပြီဗျ။
(၅..နဲ့ ၈..အချက်)အိုင်းစတိုင်းနဲ့ နယူတန် ရှားလော့ဟုန်းဇါတ်ကောင်ရဲ့ စားရေးဆရာကဘောကြာ(ကမ္ဘာကျာ်) ကြီးတွေက အဲ့ဒီအချက်တွေဟာ မှန်/မှား ခွဲခြားပြခဲ့တဲ့ သူတွေပါဗျာ ကျန်တဲ့ ရှစ်ချက် မလေ့လာဘူးတဲ့အတွက် လေးစားသမှု့နဲ့ လိုက်နာပါ့မည်(လူတကာလေးစားအားကျရတဲ့ ကမ္ဘာကျော် အတွေးအခေါ် ပညာရှင်တွေတော်တော်များများက ဆေးတံ တခဲခဲနော်..အိပ်ချိန်တွေဟာလည်း လူကတာထက်နည်းပါတယ်.)
မေ့လို့ဗျာ ထင်ရှားသက်သေ ကျုပ်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့အိပ်စက်ချိန်လေး သတိ့ရပေးပါ
အာ့ကြောင့် ကျနော် စကားများနေရတာပေါ့။ နောက်တစ်ခါ အနော့ ကို စကားပေါတယ်လို့ ပြောရင် ဒီ ပို့(စ) ကို ပြရမယ်။
အနည်းဆုံးတော့.. အဲဒီ အပေါ်က၂ခုနဲ့ညိနေပါတယ်ဗျို့..
အနည်းဆုံး အနှစ် ၂၀လောက်ဆိုတော့…
ကျုပ်…. က… ဦးနှောက်ကလေးနဲ့.. လုပ်စားနေရတာ..
… သေ.. ပါ… ပြီ.. ဗျာ…
လုံလောက်တဲ့ မနက်ခင်းစာ မစားရင်တော့ ဦးနှောက် အပြည့်အ၀ အလုပ်မလုပ်တာတော့ သေချာတယ်။ လေတပ်က ပိုင်းလော့တွေဆို No eat_ No flying ဆိုပဲ။ မဟုတ်ရင် အပြစ်ပေးခံရတယ် ကြားဖူးတာပဲ။
1 ကတော့ ကျနော်နဲ့ညိတယ်ဗျာ
သူငယ်နာ ကိစ္စတော့ မပူနဲ့ 
အိန္ဒိယမှာ သူငယ်နာ သိပ်မပြန်ဘူး ဆိုတာကို ရီဆက်လုပ်လိုက်တော့ ၊ ဆနွမ်း လား နနွမ်းလား အဲဒါ နေ့ တိုင်း များများစားလို့ တဲ့
ကျုပ်တို့ လဲ သည်နေ့ ကစပြီး ဟင်းချက်တဲ့အခါ ၊ ဆနွမ်းနှုန့် (သို့ မဟုတ်) နနွမ်းမှုန့် များများထည့်ချက်စားကြပါစို့ 
နနွမ်းတက် ကို ကိုယ်တိုင် အမှုန့် ကြိတ်သုံးမှပဲ အစစ်ရမယ် ဆိုတာ
အဲဒါ…အဲဒါ ( ခရက်ဒစ် တူ သဂျီး )
လေထုညစ်ညမ်းတာကလည်း ၈၀% လောက်ရှိတယ်။
ကျန်တာတွေလည်း နည်းနည်းစီငြိတယ်။ မနက်စာတော့ မစားပဲမနေခဲ့ဘူး။
့ တစ်သိန်းကလည်း တော်တော်နဲ့ မပြည့်နိုင်၊
အဲဒီတော့ ကျမများ အယ်ဇိုင်းမားဝင်သွားပြီဆိုရင် ပွိုင့်တွေလွှဲယူဖို့ ရွာထဲက ကလေးတွေကို အမွေလွှဲပေးပါမယ်။
လူက ဥာဏ်သိပ်မကောင်းတော့ဘူး မေ့မေ့နေပါတယ်ဆို ဒါ့ကြောင့်ကိုး ၄ ၉ ၁၀ အဲ့ဒီ ၃ ချက်နဲ့ကိုက်ပြီး … အိပ်ချိန်က လွန်နေတယ်ဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ …
ဒီပိုစ့်နဲ့တော့ ဆိုင်လားမဆိုင်လားသိဘူး နည်းနည်းတော့နီးစပ်မယ်ထင်ဒါဘဲ ( ထင်ဒါ )
သိပ္ပံပညာအရလို့ခေါ်မလား ဆေးပညာအရလို့ခေါ်မလား ဦးနှောက်က ခိုင်းစေတာကို လုပ်ဒယ်ဘာညာပေါ့
ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးတွင် စိတ်သည်အလျှင် ရှေ့သွားသောသဘောရှိ၏ လို့ဆိုသည်က တစ်ကြောင်း
လူတွေမှာ စိတ်ကြောင့် စိတ်လျှင် စိတ်၏ ကြံစည်ခြင်း သည်သာလျှင် ခန္ဓာ အလုပ်လုပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်
ဆေးပညာအရ စိတ်ဆိုတာ ဘယ်နေရာရှိလည်းမပြောတတ်
စိတ်ညစ်ညူးကြောင်း တရားတို့ကား အဘယ်တို့နည်း။
(၁)(သူတစ်ပါး စည်းစိမ်ကို) ရှေးရှုကြံစည်ခြင်း ( အဘိဇ္ဈာ )
(၂)မသင့်လျော်ရာ၌ လိုချင်တပ်မက်ခြင်း ( ဝိသမလောဘ )
(၃)သူတစ်ပါး ပျက်စီးစေလိုခြင်း ( ဗျာပါဒ )
(၄)အမျက်ထွက်ခြင်း ( ကောဓ )
(၅)ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း ( ဥပနာဟ )
(၆)ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ချေဖျက်ခြင်း ( မက္ခ )
(၇)ဂုဏ်ပြိုင်ခြင်း ( ပဠာသ )
(၈)ငြူစူခြင်း ( ဣဿာ )
(၉)ဝန်တိုခြင်း ( မစ္ဆရိယ )
(၁၀)လှည့်ပတ်ခြင်း ( မာယာ )
(၁၁)စဉ်းလဲခြင်း ( သာဌေယျ )
(၁၂)စိတ်ခက်ထန်ခြင်း ( ထမ္ဘ )
(၁၃)ခြုတ်ခြယ်ခြင်း ( သာရမ္ဘ )
(၁၄)မောက်မော်ခြင်း ( မာန )
(၁၅)အလွန် မောက်မော်ခြင်း ( အတိမာန )
(၁၆)မာန်ယစ်ခြင်း ( မဒ )
(၁ရ)သတိ မေ့လျော့ခြင်း ( ပမာဒ ) သည် စိတ်၏ ညစ်ညူးကြောင်းတည်။
၄ အိပ်ချိန်မှာ ခေါင်းကို ဖုံးအုပ်ထားခြင်း
ဟောဒီအချက် ၄ ချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်ဗျာ
အလုပ်ရှိရင်လဲ မအိပ်ပဲလုပ်တယ် လုပ်စရာမရှိရင်လဲ တစ်ညလုံးနီးပါ ဝေလေလေပဲ
ဆေးလိပ် Red Ruby တစ်ရက် တစ်ဗူးလောက်ကုန်တယ်
အိပ်ရာထနောက်ကျတော့ မနက်စာက နေလယ်လောက်မှာစားဖြစ်တယ်